ट्रक क्याप्स Born to Ultratrail रातो / कालो पुरुष र महिलाका लागि - THE INDIAN FACE
टोपी The Indian Face® recognized० भन्दा बढी देशहरूमा मान्यता प्राप्त र व्यवसायिक हो। के तपाईलाई यो दुर्घटना भएको जस्तो लाग्छ? #BORNTOBEFREE
हामी स्वतन्त्र छौं
हामी विभिन्न शिपिंग विधिहरू प्रस्ताव गर्दछौं। वितरण समय शिपिंग देशमा निर्भर गर्दछ।
SSL प्रमाणपत्रको साथ हाम्रो भुक्तान गेटवे मार्फत भुक्तान सुरक्षित गर्नुहोस्
Worldwide० यूरो भन्दा बढीको अर्डरमा विश्वव्यापी शिपिंग
पैसा फिर्ता को मामला मा फिर्ता रकम।
हामी जीवनको लागि थप्दछौं: बस्ने अचम्मको कुरा हो, हामी सबै कुरा मन पराउछौं जुन आमा प्रकृतिले हामीलाई दिन्छ र हामीलाई हाम्रो जीवनको प्रत्येक दिन दिन्छ। संसार आश्चर्यजनक ठाउँहरूले भरिएको छ जुन तपाईले खोज्नु पर्ने र आनन्द लिन पर्छ।
१००% खेल प्रेम गर्नेहरू: खेल, कार्य, साहसिक, मित्रहरू ... सबै कुराले तपाईंलाई आफैंसँग सद्भाव फेला पार्न र अधिक जीवित र ऊर्जावान महसुस गर्न मद्दत गर्दछ।
हामी स्वतन्त्र आत्मा हौ: हामी स्वतन्त्र आत्मा हौ र त्यो हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गुण हो। हामी जीवनको प्रेममा छौं र हामी प्रत्येक सेकेन्डको अधिकतम बनाउन चाहन्छौं, मानौं यो अन्तिम हो। हामी स्थापित मानदण्डबाट भाग्छौं, हामी अनुरूप हुँदैनौं र हामी नयाँ अनुभवहरूमा जान्छौं।
पुरुषहरु वा महिला को लागी क्याप्स हो?
तिनीहरू पूर्ण रूपमा युनिसेक्स क्याप्स हो, कि तिनीहरू दुबै महिला र पुरुषहरू लगाउँदछन्। ती दुबै केसमा उनीहरू राम्रो महसुस गर्छन्। तिनीहरू खेल-शैली क्याप हो कि समायोजन र विभिन्न प्रमुख आकार अनुकूलन आफ्नो SnapBack प्रकार बन्द गर्न को लागी धन्यवाद र तिनीहरू पनि एक पुरुष र एक महिला दुवै लाई मन पर्छ, जो तपाईं एक स्पोर्टी बिन्दु दिन्छ कि यति फैशनेबल। एक खेल भावना संग मानिसका लागि खेल क्याप्स।
स्न्यापब्याक प्रकार बन्द हो?
समायोज्य बटन पोइन्ट क्लोजर जुन कुनै पनि टाउको आकार फिट गर्न लम्बाई वा छोटो पार्न सकिन्छ।
ट्रक क्याप के हो?
अंग्रेजीमा "gimme टोपी" वा "फिड क्याप" भनेर पनि चिनिन्छ एक ट्रकर टोपी क्लासिक शैलीको क्याप हो तर पछाडि जाल सहित। ट्र्याकर टोपीको शैली born० को दशकमा जन्मिएको थियो जब संयुक्त राज्य अमेरिकामा गाईवस्तु ओसारपसार गर्ने ट्रकका चालकहरूले ती लगाउन शुरू गरे। ट्रक टोपी व्यावहारिक रूपमा ट्रकको कामको वर्दीको हिस्सा भयो। तिनीहरू उनको हलमार्क थिए, एक पेशेवर वाहक को प्रामाणिकता को छाप।
तपाईंको क्याप्सको देखभाल र धुनु तिनीहरूको संरक्षण र राम्रो अवस्थामा टिकावको लागि आवश्यक छ, तर कुनै तरिकामा होइन!
क्याप क्रुश नगर्नुहोला यसको मूल आकार गुमाउन छैन:
क्यापसँग धेरै आकर्षक "आकार" हुन्छ जब हामी तिनीहरूलाई बनाउँदछौं, यदि तपाईंले उनीहरूलाई नराम्रो हेरचाह गर्नुभयो भने, तिनीहरूले तिनीहरूको मूल आकार गुमाउनेछन् र तिनीहरू त्यति शान्त हुनेछैनन्। यो याद राख्नुहोस् !!
तपाईंको क्याप्सलाई जहिले पनि धुलो, घर्षण र कुनै पनि घटना घट्नेबाट जोगाउनुहोस्। जब तपाईं तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्न, तिनीहरूलाई कहिँ पनि नहेर्नुहोस्, तिनीहरूलाई ड्रर वा कपाटमा राख्नुहोस् र यदि तपाईंले यसलाई एउटा आवरणमा राख्न सक्नुहुन्छ भने उत्तम हुन्छ।
जीवनको लागि कपडालाई क्षति पुर्‍याउन वा माटो दिन सक्ने उत्पादनहरू प्रयोग नगर्नुहोस्:
तपाईंको क्याप्स राम्रोसँग जोगाउन कोलोनेस, सूर्य क्रीम, हेयरस्प्रे वा घर्षण उत्पादनहरू जस्ता उत्पादनहरू प्रयोग नगर्नुहोस्। यदि तपाइँ क्रीम वा कोलोन लगाउन पर्छ, तिनीहरूलाई लागू गर्नु अघि क्याप हटाउन कोसिस गर्नुहोस् र यसरी यी उत्पादनहरूको त्यो अंश फेब्रिकमा आउन सक्दछन। यसबाहेक, घण्टासम्म सूर्यमा तपाइँको टोपी प्रत्यक्ष नराख्नुहोस्, तपाइँलाई थाहा छ, कि सूर्यको किरणले कपडाको रंग बिगार्दछ र सामग्रीलाई क्र्याक गर्दछ।
तपाईंको क्याप्स प्राय: धुनुहोस्:
तिनीहरूलाई कहिले पनि वाशिंग मेशिनमा नहुन्नुहोस्, सँधै र हजार पटक सधै साबुन र पानीले हातले धोउनुहोस्। यो लिंकमा हामी तपाइँसँग एक लेख छोड्दछौं तपाईंको टोपहरू राम्रोसँग धुने चरणहरू। यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
यी सुझावहरूको पालना गर्नुहोस् र तपाईले देख्नुहुने छ कि कसरी तपाईको ट्र्याकर टोपी तपाईलाई लामो समय सम्म रहनेछ।